चीन स्टील फ्रेम सीट recumbent व्यायाम बाइक BGR103 निर्माता र आपूर्तिकर्ता Bestgym
वाणिज्यिक एयर बाइक
अण्डाकार क्रस ट्रेनर
चुम्बकीय अपराइट बाइक
पुनः व्यायाम बाइक
रावर प्रशिक्षण मेशीन
इस्पात फ्रेम सीट recumbent ...
चीन कारखाना मूल्य फिटनेस ...
फोल्डेबल होम व्यायाम वा ...
तातो बिक्री उत्तम मूल्य वाणिज्य ...
इस्पात फ्रेम सीट recumbent व्यायाम बाइक BGR103
११२० * o 57o * १5050० मिमी
चुम्बकीय, tension तनाव म्यानुअल समायोज्य
स्वास्थ्य केन्द्र, क्लब, घर र यस्तै।
अधिकतम लोड हुँदैछ ::
जीएस, EN77,, ROHS, सीई ... आदि।
१००००० सेट / सेट प्रति महीना
१ एसईटी / ब्राउन कार्टन
मात्रा (सेट्स) १ - १ २ - १०० १०१ - २०० > २००
Est। समय (दिन)720 25 कुराकानी गर्न
समायोज्य level स्तर प्रतिरोध
गति / समय / दूरी / क्यालोरी / नाडी
अगाडि ह्यान्डल बार
स्थिर / समायोज्य
काठी समर्थन पोष्ट
अधिकतम प्रयोगकर्ता तौल
२k किलोग्राम / २k किलोग्राम
१20२० * 1 63१ * १००० मिमी
65 6565 * २530 * 3030० मिमी
Q'ty लोड गर्दै
40'HQ: 9२ sets सेट
२ hours घण्टा अनलाइन सेवा /7बर्ष भन्दा बढी
निर्माता र ट्रेडिंग
तेस्रो पार्टी निरीक्षण, जस्तै SGS, BV, TUV… आदि। स्वीकार्य छ
बाइक चलाउनुहोस् व्यायाम, सामान्य स्वास्थ्य वृद्धि गर्न, वजन घटाउन, र चक्र घटनाहरूका लागि प्रशिक्षणको लागि प्रयोग गरिन्छ। व्यायाम बाइक लामो समयदेखि शारीरिक उपचारको लागि प्रयोग गरिएको छ कम प्रभाव, सुरक्षित, र प्रभावी हृदय व्यायाम किनभने यो प्रदान गर्दछ।
व्यायाम बाइक सबैभन्दा लोकप्रिय कार्डियो-मेशिनहरू हुन् जुन घरमा छन् र असंख्य स्वास्थ्य र फिटनेस लाभहरू प्रदान गर्दछ जस्तै तौल घटाउने, टोनिंग र सुदृढीकरण गर्ने। …
वजन घटाउने कुञ्जी भनेको तपाईले उपभोग गर्नुभन्दा बढि क्यालोरीहरू जलाउनु हो, त्यसैले यदि तपाईले प्रति दिन 500०० क्यालोरी जलाउने लक्ष्य राख्नुभयो भने तपाईले हप्तामा एक पाउन्ड बोसो गुमाउनु हुनेछ।
Ningbo Bestgym स्वास्थ्य उपकरण Co,। लिमिटेड तटीय र यातायात सुविधाजनक शहर- Fenghua Ningbo मा स्थित छ, जो 30000 वर्ग मीटर को कवर गर्दछ।
यो एक अनुसंधान र विकास, निर्माण, मार्केटिंग, सेवालाई एकीकृत गर्दछ, र एक ठूलो व्यावसायिक फिटनेस उपकरण कम्पनी हो। हामीले पेशेवरहरूको समूह ल्याएका छौं, अनुभवी अनुसंधान एवं विकास, उत्पादन र बिक्री व्यक्तिहरूको रचनात्मक र सकारात्मक टीम स्थापना गर्दछौं।
हामीसँग उन्नत असेंबली लाइन सुविधाहरू, परिष्कृत र बुद्धिमान निर्माण र परीक्षण उपकरणहरू छन्। हामी प्रभावी गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली को एक पूर्ण श्रृंखला बाहिर ले; पछिल्लो आधुनिक प्राविधिक उपलब्धिहरू अनुसरण गर्नुहोस्।
हामी ध्वनि सेवा प्रणाली प्रदान गर्दछौं, नवीन र उत्कृष्टताको लागि प्रयास गर्नुहोस्, र ग्राहकहरूको मागहरू पूरा गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
Self%% हाम्रो आत्म-उत्पादनहरू निर्यात गरिन्छ, मुख्य बजारहरू अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, एशिया..इटीसी कभर गर्दै।
l Bestgym सेवाहरू प्रदान गर्दछ र तपाईंलाई हाम्रो सहयोगको प्रत्येक चरणको लागि आवश्यक छ। हामी व्यापार साझेदारहरू हौं जुन तपाईं विश्वास गर्न सक्नुहुनेछ; तपाईं आराम गर्न र व्यापार गरेर मा जान सक्नुहुनेछ।
l कुनै पनि समस्याको लागि, कृपया कुनै पनि उपयुक्त समयमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, हामी २ 24 घण्टा भित्र हामी तपाईंलाई हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा जवाफ दिन्छौं
l उद्योग अनुभव years बर्ष भन्दा बढी।
l सामानको ढुवानी - अधिक १ worldwide देश भन्दा बढी विश्वव्यापी।
l सब भन्दा सुविधाजनक यातायात र शीघ्र वितरण।
l उत्तम सेवाको साथ प्रतिस्पर्धी मूल्य।
l उच्च गुणवत्ताका उत्पादनहरूको साथ उच्च प्राविधिक उत्पादन लाइन।
l उत्तम प्रतिष्ठा उत्पादनहरूमा आधारित उच्च प्रतिष्ठा।
प्याकेजि Det विस्तार
खैरो डिब्बा प्याकिंग / ग्राहकको प्याकिंग निर्देशन अनुसार
40 जम्मा प्राप्त भएको दिन पछि
प्रमाणपत्र (ISO9001, GS, EN957, ROHS, सीई)
तपाईं ट्रेडिंग कम्पनी वा निर्माता हुनुहुन्छ? निर्माता
MOQ के हो? २० सेट
तपाईंको डिलिभरी समय कति हो? -०-40० दिन पछि जम्मा भयो
के तपाइँ OEM सेवा स्वीकार गर्नुहुन्छ? Yes
तपाईंको डेलिभरी सर्तहरू के हो? एफओबी/ सीएफआर /CIF
भुक्तानी सर्तहरू के हुन्? %०% जम्माको रूपमा, %०% T / T द्वारा ढुवानी अघि
वेस्टर्न यूनियन सानो रकमका लागि स्वीकार्य छ।
L / C ठूलो रकमको लागि स्वीकार्य।
स्क्रो, पायलल, एलीपे पनि ठिक छन्
छनौट क्वालिटीको कारण हुन्छ, त्यसपछि मूल्य, हामी तपाईंलाई दुबै दिन सक्छौं।
थप रूपमा, हामी व्यावसायिक उत्पादन अनुसन्धान, उत्पादन ज्ञान ट्रेन (एजेन्टहरूको लागि), चिल्लो सामान डेलिभरी, उत्कृष्ट ग्राहक समाधान प्रस्तावहरू पनि प्रस्ताव गर्न सक्छौं।
शिपमेंटको तपाईंको उपलब्ध पोर्ट के हो? निing्गो पोर्ट, चीन
तपाईका सुविधाहरुका सेवाहरु के के हुन्?
हाम्रो सेवा सूत्र: राम्रो गुणवत्ता + राम्रो मूल्य + राम्रो सेवा = ग्राहकको विश्वास
तपाईको बजार कहाँ छ?
संसारका २० भन्दा बढी देशहरूलाई ढाक्दै
(अमेरिका, जर्मनी, स्पेन, अस्ट्रिया, पोर्तुगल, अष्ट्रेलिया, पोल्याण्ड, जापान… आदि)
अघिल्लो: घरले राम्रो मूल्यको साथ चुम्बकीय पुनः प्रयोग बाइक प्रयोग गर्दछ
स्पिन गर्दै इनडोर व्यायाम फिट बाइक जिम स्पोर्ट बाइक
होम क्रस ट्रेनर जिम फिटनेस उपकरण म्याग्नेट ...
घर फिटनेस उत्पादनहरू व्यायाम बाइक डब्ल्यू ...
फोल्डेबल चुम्बकीय व्यायाम बाइक T टेंशनको साथ ...
चीनबाट बेच्ने चुम्बकीय व्यायाम बाइक ...
उत्तम कार्डियो जिम उपकरण इलिप्टिकल क्रस ...
Zhangjia औद्योगिक क्षेत्र, शांग्टीन टाउन, Fenghua, Ningbo, चीन
ईमेल:केन्द्रा @ bestgymfitness। com